Dzivirira yako Apple Watch neiyi vinyl | Ndinobva mac
Dzivirira yako Apple Watch neiyi vinyl
Pane dzakawanda nguva isu takuratidza iwe zvakawanda zvishongedzo zvezvino Apple Watch. Dzimwe nguva isu takataura newe nezvemhando nyowani dzisiri-dzepakutanga tambo dzeApple kuitira kuti ugone kuchinjisa yako Apple Watch uye nedzimwe nguva dzatakakuratidza tsigiro yekuchaja.
Ino nguva isu tawana webhusaiti kwavanokutengesa iwe a vinyl inoenderana nemuviri wese weApple Watch, uchirisiya rakachengetedzwa zvakakwana kana pakaita dhamu, haudi kuti rikanganiswe kana kukwanisa kuvhara tsaona yawakakonzera nekuikwiza nechero nzvimbo.
Iyo inodzivirira vinyl iyo anozvidaidza kuti Armorsuit. Mudziviriri uyu anouya mune kit iyo, kuwedzera kune vinyl yekudzivirira muviri weApple Watch, inosanganisira muchengeti wechidzitiro. Vinyl yekudzivirira yemuviri weApple Watch unoifukidza zvese pamativi mana uye kumashure kwayo. Chii chimwe, inovharawo kumucheto kwekorona inotenderera uye bhatani repadivi.
Ruvara rwevinyl yekudzivirira haigone kusarudzwa uye isu tinongova nemhedzisiro ye kabhoni fiber murima grey, saka chero mhando yeApple Watch yatinayo, mushure mekunamira ino mudziviriri ivo vachataridzika zvakafanana. Mutengo wacho i $ 19,95 uye iwe unogona kudzidza zvakawanda nezvazvo kubva kune inotevera webhusaiti.
Kana iwe uchida kuchengetedza yako Apple Watch kana iwe uchida kuvhara kukuvadza kwawakaita iwe, uyu vinyl dziviriro isarudzo yakanaka kwazvo, kunyangwe ichirasikirwa neayo akanaka anodized aruminiyamu kana chitarisiko chesimbi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dzivirira yako Apple Watch neiyi vinyl
Ese mabasa iwe aunowana muiyo iOS 1O Clock App
Angela Ahrendts kuApple Chitoro muWorld Trade Center